.အိပျမကျတှကေိုဖွဈအောငျလုပျဖို့ အားအငျအပွညျ့ပဲဆိုတာ ပိုကျဆံရှိလို့ပွောအားရှိတာလို့ ပွောဆိုသူအပျေါ ပွနျလညျအားပေးလာတဲ့ နခွေညျဦး. – Askstyle
စကားပွောပှငျ့လငျးပွီး အရမျးကိုခဈြဖို့ကောငျးလှနျးတဲ့ နခွေညျဦးကတော့ သူမရဲ့ လူမှုနထေိုငျမှုဘဝကို ကှယျဝှကျမှုမရှိပဲ ပရိသတျတှကေို ခပြွရဲတဲ့ ခပျဂျေါဂျေါမိနျးကလေးတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ အမွဲလိုလို အမိုကျစားဖကျရှငျတှနေဲ့ တှမွေ့ငျရလရှေိ့တဲ့ နခွေညျဦးကတော့ လတျတလောမှာတော့ ပွငျဦးလှငျမွို့မှာ “ခဈြပနျးဝါဝါ” ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးကို သှားရောကျရိုကျကူးပေးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ Social Influencer ပီပီ ပရိသတျတှအေတှကျ အားတကျစမေယျ့စကားတှကေို အမွဲတမျးပွောလရှေိ့တဲ့ နခွေညျဦးက ဒီတဈခါမှာလညျး (၂၀၂၁) မှာ ဖွဈခငျြတဲ့ အိပျမကျတှကေို အားအငျတှအေပွညျ့နဲ့ ပွုလုပျဖို့ အခုလိုပဲ ပွောလာပါတယျ။
“လူငယျဆိုတာ ကွိုးစားနရေမယျ။ ပငျြးရိနလေို့ မရဘူး ရောငျ့ရဲနလေို့မရဘူး။ နခွေညျဆို(၂၀၂၁) မှာ ဖွဈခငျြတဲ့ အိပျမကျတှေ အမြားကွီးဖွဈအောငျလုပျဖို့လညျး အငျအားတှအေပွညျ့ပဲ။ ဇှဲမလြှော့နဲ့ နောကျပွနျလှညျ့မကွညျ့ကွေး chillies. Show me your best in 2021 ”ဆိုပွီး အားပေးစကားပွောလာပါတယျ။
နခွေညျဦးကတော့ သူမကို ပိုကျဆံရှိလို့ အိပျမကျတှအေကောငျအထညျဖျောဖို့ လှယျကူကွောငျး ပွောလာတဲ့ ပရိသတျကို အားပေးစကားပွောလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ နခွေညျလညျး (၂၀၂၁) မှာဖွဈခငျြတဲ့ အိပျမကျတှအေမှနျတကယျဖွဈလာနိုငျပါစနေျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
စကားပြောပွင့်လင်းပြီး အရမ်းကိုချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းတဲ့ နေခြည်ဦးကတော့ သူမရဲ့ လူမှုနေထိုင်မှုဘဝကို ကွယ်ဝှက်မှုမရှိပဲ ပရိသတ်တွေကို ချပြရဲတဲ့ ခပ်ဂေါ်ဂေါ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲလိုလို အမိုက်စားဖက်ရှင်တွေနဲ့ တွေ့မြင်ရလေ့ရှိတဲ့ နေခြည်ဦးကတော့ လတ်တလောမှာတော့ ပြင်ဦးလွင်မြို့မှာ “ချစ်ပန်းဝါဝါ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို သွားရောက်ရိုက်ကူးပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Social Influencer ပီပီ ပရိသတ်တွေအတွက် အားတက်စေမယ့်စကားတွေကို အမြဲတမ်းပြောလေ့ရှိတဲ့ နေခြည်ဦးက ဒီတစ်ခါမှာလည်း (၂၀၂၁) မှာ ဖြစ်ချင်တဲ့ အိပ်မက်တွေကို အားအင်တွေအပြည့်နဲ့ ပြုလုပ်ဖို့ အခုလိုပဲ ပြောလာပါတယ်။
“လူငယ်ဆိုတာ ကြိုးစားနေရမယ်။ ​ပျင်းရိနေလို့ မရဘူး ရောင့်ရဲနေလို့မရဘူး။ နေခြည်ဆို(၂၀၂၁) မှာ ဖြစ်ချင်တဲ့ အိပ်မက်တွေ အများကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လည်း အင်အားတွေအပြည့်ပဲ။ ဇွဲမလျှော့နဲ့ နောက်ပြန်လှည့်မကြည့်ကြေး chillies. Show me your best in 2021 ”ဆိုပြီး အားပေးစကားပြောလာပါတယ်။
နေခြည်ဦးကတော့ သူမကို ပိုက်ဆံရှိလို့ အိပ်မက်တွေအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ လွယ်ကူကြောင်း ပြောလာတဲ့ ပရိသတ်ကို အားပေးစကားပြောလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နေခြည်လည်း (၂၀၂၁) မှာဖြစ်ချင်တဲ့ အိပ်မက်တွေအမှန်တကယ်ဖြစ်လာနိုင်ပါစေနော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။